February | 2013 | Danya Wadi
By danyawadi February 28, 2013 Leaveacomment
သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့် အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပြည်တွင်း သတင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၃ M-Media သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးဆန်းဆင့် အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်းရုံးခန်းသို့ လာရောက်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ရန်ကုန်။ ။ (၂၇-၂-၂၀၁၃) ရက်နေ့ နေ့လယ်(၂)နာရီတွင် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး သရေစည်သူ ဦးဆန်းဆင့်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ အမှတ်(၁၈၃)ရှိ အစ္စလာမ် သာသနာရေးရာ ကောင်စီ ဌာနချုပ်ရုံးသို့ လာရောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ ကြီး၏ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ အိုလမာ-အစ္စလာမ်သာသနာ့ပညာရှင်များအဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ အလ်ဟာဂ်ျ မောင်လာနာ ဦးသိန်းမြင့်၊ ဗဟိုအမှုဆောင် အလ်ဟာဂ်ျ […]
The Rohingya of Burma are on the edge of disaster. Why won’t the world act?
The Rohingya of Burma are on the edge of disaster. Why won’t the world act? February 28, 2013 The international community has been shamefully unresponsive to this crisis The news last week that aroundahundred refugees from Burma had slowly starved to death after 25 days at sea may have shocked those unfamiliar […]
အိပ်စက်ချိန် မခြွေတာ သင့်သည့် အကြောင်းရင်း (၁၀)ခု
Myawady Health‘s photo. အိပ်စက်ချိန် မခြွေတာ သင့်သည့် အကြောင်းရင်း (၁၀)ခု *************************************** ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်သော ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်လို သူများအနေနှင့် အိပ်ချိန် ပြည့်ပြည်၀၀ လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုသည်။အိပ်ရေးမ၀သည့် အခြေ အနေများသည် ကျန်းမာရေး အတွက် ဆိုးရွားသော အခြေအနေများ သက်ရောက် လာနိုင်ကြောင်း၊ မကြာခဏ အိပ်ရေး ပျက်ခြင်းကြောင့် အာရုံကြော ထိခိုက်မှု များအပြင် အခြားသော ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာ များပါ တွေ့ကြုံရတတ်ပြီး လူ့သက်တမ်း ကိုပါ ထိခိုက် လာစေနိုင် သည်ဟု သိရှိရသည်။ အမေရိကန်တွင် လူဦးရေ သန်း(၅၀) မှ သန်း(၇၀) ကြားအထိသည် အိပ်ရေး မ၀မှုကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေး […]
ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပညာရှင်များ ဟောပြောပွဲကို မတ် ၉ ရက်တွင် ဘန်ကောက်မြို့၌ ပြုလုပ်သွားမည် …
U U Mhaw Sayar ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပညာရှင်များ ဟောပြောပွဲကို မတ် ၉ ရက်တွင် ဘန်ကောက်မြို့၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းများက ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းရှိ ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေးပါတီမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးလှစောကပြောသည်။ “သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာအေးချမ်းနဲ့ ပြည်ပအဖွဲ့တွေ ဦးဆောင်လုပ်တာ။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုပဲ ဆွေးနွေးဖို့များတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အခြား အမတ်တစ်ယောက် သွားဖို့များတယ်”ဟု ပြောသည်။ အဆိုပါ ဟောပြောပွဲသို့ ပြည်တွင်းမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသင်းတို့ တက်ရောက်ကြမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ https://www.facebook.com/7daynews/posts/488562347872071
ဂြိုဟ်သိမ် ဂြိုဟ်မွှားများ ရှာဖွေရေး ဂြိုဟ်တုပါ ဒုံးပျံ တစ်စင်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ လွှတ်တင်
နယူးဒေလီ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ကမ္ဘာ မြေပြင်ပေါ်သို့ ကျရောက်လာမည့် ဂြိုဟ်သိမ် ဂြိုဟ်မွှားများ၏ အန္တရာယ်ကို လေ့လာ စောင့်ကြည့်နိုင် ရန် အိန္ဒိယ နိုင်ငံသည် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်း အတွင်းသို့ ကနေဒါ နိုင်ငံမှ ဂြိုဟ်တုတစ်စင်း အပါအဝင် ဂြိုဟ်တု ခုနစ် စင်းပါရှိသော ဒုံးကျည်ပျံ တစ်စင်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က လွှတ်တင်ခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။ Polar ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ရေး ယာဉ်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း အန်ဒဟာ ပရာဒက်ရှ် ပြည်နယ်မှ ကမ်းလွန်ကျွန်း တစ်ခုပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော Shriharikota ဒုံးလွှတ်စင် မှ လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အာကာသ ဗဟို ထိန်းချုပ်ရေး အဖွဲ့က လွှတ်တင်ခဲ့သော ဒုံးပျံ လွှတ်တင်မှုကို […]
DVB TV News‘s photo. ကေခိုင်ကျော်၊ DVB ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတရားခံကို ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရေးအတွက် တုံရွာသပိတ်စခန်း မှာဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ရက်နေ့ကအစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ “ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတဲ့သူတွေထဲက ၂၆ယောက်ကတော့ မနက် ၁၁နာရီကနေစပြီး ၁၂နာရီ အကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒဖော်ထုတ် ပါမယ်။ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထား တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုစာလုံးနဲ့သရုပ်ဖော်ပြီး တောင်းဆိုမှုတွေထပ်လုပ်သွားမှာပါ။ကော်မရှင်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ဖြတ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ စီမံကိန်းလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှု တရားခံကို အရေးယူပေးဖို့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပါမယ်။ ဒီနေ့ဟာ သပိတ်စခန်းတွေအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရတာလဲ သုံးလပြည့်တဲ့နေ့ပါ။” လက်ပံတောင်းတောင်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောက်ရှောက် ရေးကော်မတီမှတာဝန်ခံကိုဟန်ဝင်းအောင်ကဆိုပါတယ်။” လက်ပံတောင်းတောင်အရေးအတွက်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြ ကေခိုင်ကျော်၊ DVB ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ လက်ပံတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတရားခံကို ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးရေးအတွက် တုံရွာသပိတ်စခန်း မှာဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ရက်နေ့ကအစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ “ ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတဲ့သူတွေထဲက ၂၆ယောက်ကတော့ မနက် ၁၁နာရီကနေစပြီး ၁၂နာရီ အကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒဖော်ထုတ် […]
ပြည်သူ ကို မကူညီ တဲ့ ရဲ တပ် ဖွဲ့ 
စာနာမှုမ၇ှိဘူး ပြည်သူ ကို မကူညီ တဲ့ ရဲ တပ် ဖွဲ့၂၅.၃.၂၀၁၂ ၊တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဗဟန်းမြို့နယ် ရေတာရှည်လမ်းဟောင်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းအနီး ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အသက်(၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကလေးငယ်တဦး ဒါဏ်ရာများဖြင့် လဲနေသည်ကို တွေ့ရှိသောကြောင့် အနှေးယာဉ်လုပ်သားကိုသံချောင်းမှ ဗဟန်းရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ဗဟန်းရဲစခန်းတာဝန်ကျအရာရှိမှ အဆိုပါကိစ္စကို မိမိတို့ရဲစခန်းမှ တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်း၊ မကူညီနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ အနှေးယာဉ်လုပ်သား ကိုသံချောင်းသည် ရဲစခန်းကို တာဝန်သိပြည်သူတယောက် အနေဖြင့် သတင်းသွားပို့သော်လည်း ရဲအရာရှိ၏ ငြင်းပယ်မှုကြောင့် လဲနေသောကလေးထံပြန်သွားပြီး လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့် အနှေးယာဉ်လုပ်သားများ မှ တတ်နိုင်သမျှငွေကြေးစိုက်ထုတ်ခါ တက္ကစီကားဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ကလေးရဲ့မိဘများကိုဆက်သွယ်မှုရရန်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေသည်။ ထိုသို့ တာဝန်ကျရဲအရာရှိရဲ့ တာဝန်မဲ့မှုနှင့် ပြည်သူထဲက အနှေးယာဉ်လုပ်သားတဦးရဲ့ တာဝန်ယူမှုအသိစိတ်ဓါတ်ကို နိုင်းယှဉ်နိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ဗဟန်းရဲစခန်းမှ […]
ပြည်တွင်းလေကြောင်းလုံခြုံမှုခရီးသည် အချို့ မေးခွန်း ထုတ်
ပြင်သစ် ဘုန်းတော်ကြီး ဘီဂန်ဒက်(၁၈၁၃-၁၈၉၄) ရဲ့ Outline of the History of the Catholic Burmese Mission from the Year 1720 to 1857 စာအုပ်
ခဲအိုဖြစ်သူကမှိုဝယ်မည်ဟုလိမ်လည်ခေါ်ဆောင်ကာ ခယ် မ ကို တစ် လ နီး ပါး အ လို မ တူ ဘဲ ပေါင်း သင်း
Categories Select Category ကျန်းမာရေး (531) ခရစ်ယာန်ဘာသာ (10) စာပေအက္ခရာ (4) ထူးဆန်းထွေလာ (125) နည်းပညာ (91) ဖတ်စရာကဏ္ဍ (3) ဗဟုသုကဏ္ဍ (16) ဗုဒ္ဓဘာသာ (78) မျက်မှောက်ရေးရာ (4) မှတ်စု (1,357) သတင်းများ (12,278) သမိုင်း (431) သုတစာပေကဏ္ဍ (60) အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ (58) သူ့အကြောင်း (361) အင်တာဗျူး(268) အစ္စလာမ်ဘာသာ (344) အထူးကဏ္ဍ (2,081) အိတ်ဖွင့်စာ (22) အထောက်ထားများ (182) အထွေထွေ (38) အခြားကဏ္ဍ (2) အခြားဘာသာ (6) ဥပဒေ (210) ဆောင်းပါးများ (4,550) ပေါ်လစီ (881) ရွေးကောက်ပွဲ (167) မြန်မာ – English (9) မြန်မာစကားပုံ (7) Burmese Version (1) Census (166) Contact (6) Dictionary (9) English Dictionary (3) Other Dictionary (1) Discovery (109) Election (3) English – မြန်မာ (8) English – Rohingya (3) English Version (1,576) Articles (750) Documents (99) History (269) Arakan History (202) Burmese History (57) M-M History (46) Scripts (5) World History (42) Interview (20) Laws (12) News (965) Breaking News (282) Local News (292) Open Letter (12) Other News (10) World News (555) Religious (37) Islamic (36) Other Religious (2) English-Myanmar, Pali-Myanmar (1) General (229) Introduction (5) Link (248) Movie (110) Other Dictionary (6) Photos (755) Popular Post (5) Rohingya – English (10) Special (5) Videos (340) Website (43)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month September 2019 (2) July 2019 (3) May 2019 (4) April 2019 (7) March 2019 (4) February 2019 (31) January 2019 (24) December 2018 (9) November 2018 (19) October 2018 (27) September 2018 (51) August 2018 (37) July 2018 (82) June 2018 (86) May 2018 (102) April 2018 (69) March 2018 (78) February 2018 (100) January 2018 (85) December 2017 (116) November 2017 (118) October 2017 (98) September 2017 (118) August 2017 (117) July 2017 (80) June 2017 (14) May 2017 (8) April 2017 (16) March 2017 (11) February 2017 (11) January 2017 (20) December 2016 (50) November 2016 (23) October 2016 (23) September 2016 (15) August 2016 (33) July 2016 (40) June 2016 (41) May 2016 (52) April 2016 (113) March 2016 (96) February 2016 (99) January 2016 (178) December 2015 (140) November 2015 (201) October 2015 (88) September 2015 (93) August 2015 (140) July 2015 (91) June 2015 (93) May 2015 (143) April 2015 (150) March 2015 (150) February 2015 (105) January 2015 (155) December 2014 (289) November 2014 (175) October 2014 (195) September 2014 (166) August 2014 (189) July 2014 (266) June 2014 (184) May 2014 (314) April 2014 (256) March 2014 (242) February 2014 (218) January 2014 (340) December 2013 (258) November 2013 (231) October 2013 (232) September 2013 (234) August 2013 (387) July 2013 (359) June 2013 (533) May 2013 (672) April 2013 (701) March 2013 (717) February 2013 (626) January 2013 (861) December 2012 (712) November 2012 (665) October 2012 (719) September 2012 (449) August 2012 (553) July 2012 (434) June 2012 (541) May 2012 (423) April 2012 (360) March 2012 (87) February 2012 (89) January 2012 (26) December 2011 (83) November 2011 (37) October 2011 (1)